XABASHI XALAY GUURTAY
Xalayda sare aan ku sheegay, ma aha xalayda raadkeedu qoyanyahay ama xalaydii ka horeysay toona. Sidoo kale, meeshu ma aha; Xamar, Baydhabo ama Baladwayne...Xalayda aan soo xusuustay kana sheekayn doono, waa xalayda maalinkii xigay wixii dhacay, mar labaad iyo mar saddexaad dhici doonaan haddaan caqli qumman la helin baryaha soo aaddan. Xabashi mid bay ku bixi; xabbad ama xaajaysi Soomaali - Soomaali ah. Labada xaal waa isu-dhammaystir. “Oodi qaadid iyo jiidid waa isla gurigayn”.
Waa habayn tagay oo sannadkii 2001dii ka mid ahaa. Meeshu, waa dagmada Baladxaawo, koofurta galbeed ee soomaaliya, kana tirsan gobolka Gedo. Waxay dhacdaa xagasha kulmisa; Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya, magaalooyinka kala ah; Baladxaawo, Mandheera iyo Suufka.
Wixii ka dambeeyay dagaalladii gobolka Gedo ku dhex maray ururkii “Alitxaad Alislaami” iyo “Ciidamadii Itoobiya” oo gacan saarka la lahaa; ururkii SNF (soomaali National Front), gobolku ma dagani, qax iyo xasaradna kama dhammaan. Guud ahaan gobolku wuxuu hoos galay maamulka xabashida, si gaar ah, magaalada Baladxaawo oo xilli kasta ugu dhaq-dhaqaaq roonayd gobolka.
Dacasle, Gacmey iyo Saymon waa saddex sarkaal oo ka tirsan “Ciidanka Xabashida”, talada degmada Baladxaawona gacanta ugu jirto. Baladxaawo iyo gobolka Gedo cid aan iyaga ahayn wax lagama waydiiyo. "Amre iyo reebe", waa iyaga. Dadkii gobolka u dhashay waxay noqdeen marti wixii loogu arrimiyo ogol.
Dacasle; -magac ree Baladxaawo, taliyaha ciidanka ulabaxeen- wuxuu u taliyaa 30 askari oo magaalada dhabarkeeda dambe dagan. Hubkoodo ma dhaafsana inta askari walba dhabarka ku sito. Ha yeeshee, meel aan saa u durugsanayn waxay ku ogyihiin guutooyin hub fudud iyo hub culus ku hubaysan oo indho-hore ay u yihiin. Xerada ciidanku waa; dhufays dheer oo wareeg (circle) ah isuna furan. Dhexda waxaa ka dhisan; “Balbalo”, hoosteeda askartu maalinkii ku indho-guduudsato iyo Booyad ay soo dheceen oo biyaha ay ka cabbaan.
Gabbalku markuu dhaco, askari walba wuxuu isku raraa wixii meesha ka yiil, xeradana waa laga baxaa. Magaalada daafaheeda iyo suryooyinka xaafadaha ayay isdaba qoodeyaan. Waxa soo saaray; waa baqdin iyo dhagar ah, ha loo qaato ciidan fara badan in uu xalay magaalada soo galay. Guryaha dhabarkooda dambe, inta fariistaan ayay Raadiyo “Rakaal” ah habaybkaa oo dhan ka shaquuq siinayaan. Habayn oo dhan waa u socod iyo hadba meel ku gabasho.Taliye; Dacaslle; maalinka, galinkiisa hore oo dhan wuxuu hor taagan yahay; Bakhaarada, Makhaayadaha iyo Goobaha Ganacsiga, baad dadban ayuu uruursadaa.
Gacmey; -magac reer Baladxaawo ugu yeeraan xiriiriyaha Addis Ababa iyo garabyada SNF- arrimo hore uu u murgiyay kolkii la kala furfuri waayo, ayuu tuulada Suufka (oo dhanka xabashida ah) ka soo tallaabaa isaga oo wata; Baabuur Siiblle ah (Toyota Land cruiser) iyo istaaf si xooggan u hubaysan. Marmar, wuxuu dagmada ka soo gala dhanka Dooloow. Waa jabhad hore, darajadiisa ciidan waa Dhamme (Kabtan). Madaxda isdhinac-yaacada oo SNF ayuu “Saldhigga Boliiska” ku soo uruuriyaa isuna dhagaystaa. Cantara-baqash, kolkay ka dhammaan waayaan, giddigood dibadduu u jafaa. “Mid-mid u soo daaya”; ayuu ku yiraahdaa, wiilasha u horaya!. Mid walba idhabarka inta ka dharbaaxo ku yiraahdaa; “adigaan, carrada ku joognaa, cid aan adiga ahayn uma maqni, sii soco waa lagaa warhayaa”.
Mid walba, cunug yar oo cantoobo Nac-nac ah faraqa loogu shubay, isaga oo ka farxad badan ayuu xatabadda ka boodaa. Kuwii ay is-xigeen oo, iridka dhooban, walina aan oodda laga qaadin, inta aad u huruufo, indhaha ku canaanto, xaggii, baabuurkii iyo istaafkii ku ogaa isu dhuftaa. Saaxiibadi, siigo iyo qiiq indhaha inta uga rogo, suuqa jaadka isa-siitaagaa. Maalinkaa Jaadka wuxuu ku cunaa, isagu in uu yahay; “Diiqa magaalada iyo Libaaxa Gedo”.
Saymon; waa Gaashaanlle, ka tirsan “Xafiiska Wardoonka Ciidanka Xabashida”. Teeriyo Baydhabo ayuu socdaa. Saldhiggiisu waa Dooloow Addo (gaddiga xabashida) waa ninka kaliya oo “lap top” ku shaqeeya, qoraaladana ku diyaarsada. Wuxuu ururiyaa, falanqeeyaa, dabadeed, xog uruusan ka diraa wararka yaal; Gedo, Bakool iyo Bay. Wuxuu aad u daneeyaa in uu kismaayo xog badan ka helo, xiriirra la sameeyo madaxda ka talisa Jubbada Hoose. Sida Dacasle, ma ah saqajaan caadeqaate ah. Maslaxadda dalkiisase kama waabto.
Saraakiishaa, dhiggooda soomaalida ah oo gobolka ku sugnaa, waxay qaayibeen (ogolaadeen) quursi aan waligood hore loo badin. Saraakiil “Gaashaanle Sare” u badan oo, Dugsiyo Ciidan (war academy) ka soo qalan jabiyay, ayaa taagni ku salaama Dacasle. Saaraakiisheennu, Dacasle iyo kuwa la mid ah, kolkay soo mooqdaan fadhi siima hawoodaan. Runtii, cilladu (aafadu) kaligood kuma habsan oo Saraakiishii 1977kii; Gaasaska xabashida ah rogtay ayaa darbiyada daadsan, sixun iyaga oo u dayacan. Ciidankii Qalabka-siday Ee Soomaaliyeed, 1990kiii wixii ka dambeeyay hadduu lahaa; Saraakiil, Saraakiil xigeen, Alifley iyo Dabley, cillad dawlad la'aan la yirrahdo, darteed, nin waliba, gar wuxuu u arkay; in uu qabiilkiisa soo dagaalgalyo. Natiijadii ka dhalatay arrintaa waxay noqotay; in sarkaalkii soomaaliyeed, isaga oo soo jeeda; xurmayntii, maalgalinta badan iyo waqtiga dheer la galiyay, si fudud looga xayoobiyo. Marka laga reebo, dhawr carrada qaraab ka heshay oo iyana sixun loogu adeegto, sarkaaalka soomaaliyeed oo dhiigga leh, waa ka xishooda in uu yiraahdo: Ciidanka Qalabka Sida Ee Soomaaliyeed waxaan ka gaaray darajadaa. Awoodda wiilasha Tigre ku qabsadeen "Addis Ababa” taladana kula wareegeen (Alle ka sokow) Saraakiishii hore oo soomaaliya ayaa farsamadeeda lahaa, waana (Made in Somalia) 100%.
Saraakiisha Gedo, si fiican ayay u Jaadaan (Qayilaan). Tolka dhexdiisa markay joogto oo kaliya ayay codka sare u qadaan. Dhaarta iyo gooddigu waa inta; Gacmey, giirkiisa aysan u jeedin. Markuu Baladxaawo u soo tallaabo ayay sida carruur aabahood muddo dheer maqnaa u yimid, kal ashtakoodaan; “Abbe fiiri; intaad maqnayd, hebl waxaas ayuu igu sameeyay, saas iyo saasna waa i yiri. Aabbe, wiilkaan ma iga ceshanaysaa?, mise waa iska celiyaa?!”.
Ereyadaa marka la oranayo; isbihin-bihin aad ah waa in ay wajiga ka muuqato!. Markay sidaa u hadlayaan, taliyuhu, aad ayuu hoos uga farxaa, waxaana u sawiranta hawshii uu qabtay, sida ay u meel martay!. Sidiisaba, arrimaha la kala sheegto, xal deg-deg ah oo, kama dambays ah kama gaaro. Markaa oo kaliya ayuu foodda u kala qaadaa. Isaga oo mid walba hoos u yiri;“(Antee duruneh). Adaa fiican, wixii kaa hor yimaada, iska celi” ayuu meeshii uu ka yimid ku laabtaa. Teeriyo, inta “Gacmey” ka soo laabanayo, wax-qabadkooda iyo wax-tarkoodu waa; “iska celi”!.
11-kii bilood oo Baladxaawo aan ku sugnaa, waxaa caado ii ahayd in aan waabarkii kallaho oo, makhaayad (Ximbil) oo odayaal salaadda subax ka soo laabtay ka sheekeeyaan; Kefeega aroorta ka cabbo. Sheekadoodu waa igala tayo roonayd sheekada, ragga gar-madowda ah; oo xan, xasad iyo isku-dir, u badan. Odayaashaa waxaa ka mid ahaa oday la oran jiray “Warsame Rooti” (AUN). Aad ayuu u haasaawe macaan, deeqdana ugu gacan furraa. Ma ogola, Shaaha iyo Qaxwaha aroorta la cabo, in cid kale bixiso. Dhawr jeer ayaan isku qabsannay, aniga iyo isagu, bixinta wixii la cabbay!.
Saaka, sidii caadada ii ahayd, waa soo kallahay. Nin dadka magaalada ka mid ah, ha yeeshee oqoon qumman aanan isulahayn, ka war hayase in aan Qurbaha ka imid, ayaa isaga oo aan i nab-daadin, kolkuu i dhinac marayo igu yiri; “xabashi xalay guurtay”. “War maxaad tiri”; ayaan iri”. “Xabashi xalay guurtay”, wax kale iima raacin, waana dhaqaaqay.
Aniga oo aan dhag la qabto lahayn, ayaan ku soo dhex-dhacay Makhaayaddii Xinbil. “Xabashi ma, xalay guurtay?!”, ayaan waydiiyaya odayaashii iga soo horeeyay. “Baladii xalay ayaa ilaahay far iyo suul ku qaaday”; war la macne ah ayaa dhowr ruux mar qura wada tiri. Meel gaar ah inta fariistay oo, koob Kofee ah dalbaday, ayaan; dhul garaacid bilaabay. Tolow, maxay maqashay?. Halkee, laga qandhuuftay. Maxaa xigi doona?. Dadkani, maamul keedii dhaama ma samaysan karaan?. Wallee, “Ayax tag eella reeb”. Baryahaa, waxaa la soo gabagabeeyay shirkii CARTA, Jabuuti
8:00 subaxnimo kolkay saacaddu isku taagtay ayaa qaylo ka yeertay dhankii dhufaysku magaalada kaga beegnaa. Afkaa gacanta la saaray. Daqiiqado, ka bacdi, waxaan ogaanay; in dadwayne caraysan ku qamaameen Dhufayskii, Balbaladii xunta ahaydna gubeen, damceenna in ay Hanta-biyaha dilin-dillaystaan.
11:00 barqa nimo, xaaladii dhan kale oo, yaab leh ayay isu rogtay. Maleeshiyo garbaha meesha ka dhisn mid ka mid ah taageerta -taageero kale ma jirtee, ku hayb ah- ayaa sidii “Ciidan Komaandoos” ah oo, aad u tababaran u daatay dhufayskii. Dhufayskii xunka ahaa Saladda Duhur intaan la addimin, wuxuu isurogay “Cad-dhuleed Muqaddas” ah, oo Istraatiijiya macne wayn leh ku fadhiya.
Odayaal magaalada ah, ayaa isku carcararay, kuna dadaalay; xabashi in laga raysto mooyee in aan loo darsan. Taladaa hirgalinteeda dadaal xoog leh iyada oo loogu jiro, ayaa waxaa soo galay dhowr Baabuur oo, Bagaash ka keentay Xamar. Saldhigga Boliiska inta lagu leexshay ayaa canshuurtii la laba jibaaray. Ganacsatadii badeecadu u socotay, waa diideen in ay Badeeco canshuur faro badan la saaray rogtaan. Bakhaaradii oo idil laba "Quful Siddeed" inta ku jabsheen, ayay makhaayadaha wax ka fariisteen. Halkaa, markay marayso Maleeshiyadii dhufayska u daadatay, haddana, waxay weerar ku qaadday guri uu daganaa, nin aano hore ay ku tirsanayeen. Dhimasho iyo dhaawac fara badan kolkay geysteen, Maleeshiyadii waxay dhufayskii ku laabatay iyada oo nabad qabta.
Tolbeelay, inay willato (yeedho), soo ma aha?!. Haah oo, waa maalinkeedi. Qolo dhufayskay isku gurtay. Qolo dhufayskay isku gadaantay. Qolana sidii caadadu ahayd Mandheera ayay u qaxeen. Anigu kuwa dambe ayaan iska raacay. Magaaladii cammirrayd sacado gudahood; albaabadeedaa isgaraacay. Dabayl baa ka dhex foorisay. Leexaa samada isku shareetay. Jiingadihii guryaha saarraa ayaa sharqamay. Jidadkii fars-magaaladaa haawaday. Mid AK47 laab la taagan mooyee cid kale magaalada kuma harin.
Reer Baladxaawo, nasiib darradooda, qaxba qax ayuu u dhiibaa. Sidaa awgeed, qaxii inta u noglaadeen, ayay laba ruux markay isdhugato, sidii Tukihii bararaf, oran. Xilliga nabad-waynta loo fadhiyo; kurtumada, qodxaha, nagaarka iyo maro-ku-dhagga, iska jara lagama karo. Xabashi nacayb wax dhafsan idiinma hayso, ee ka tashada ma gartaan. Mid walba Buur Aaminow  xaggeeda ayaa afka Baabuurkiisu u jeedaa!.
Qoladii dhufayska ku jirtay saanad ku filan waxay ka soo rarteen Suufka, qoladii kalana, saraakiish xabashida oo Suufka joogta, waxay soo fareen; “in ay jabsada saanadda Baladxaawo taal oo, raggeeda nin ka mid ah Bakhaar ugu xeraysan. Annaga ayaa u magidoonna, kolkuu soo laabtee, ragga iska celiya". Hebelka ay sheegayso waa nin ka mid ah garbaha SNF-ta tarantay, xilligaa wuu ka maqnaa magaalada. Ma u jeeddaa, labada dhinacba iyada ayaa rasaasta siisay?!. Sidaa waa xirfaddeeda, qayb ka mid ah. Dhanka kale, lama sheegin; soomaali dhaawac ah oo xabashi dhayday ama dawadiisa xil ay iska saartay!. Soomaalidu, kharajka; duugta (aaska) iyo daawaynta iyaga ayaa usu qaba. Rasaastu waa bilaash. Raashinka, jaadka, shidaalka iyo laaluushka xabashida waxaa laga bixiyaa dakhliga ka soo xerooda isbaarada iyo canshuurta
Saddex maalmood kolkii la isgaraacayay, lana kal adkaan waayay, ayaa galabtii dambe xabashi oo Tekniko culus wadata soo dhigtay. Durba, shan iyo labaatan wiil ayay haadda u wartay. Toban daqiiqo ka dib waxay la kacday ciidankii dhufayska ku hareeraysnaa. Siday dabada uga wadday; Buurta Labada Celi  ayay kala hoobatay. Casarka, maalinkii labaad, ayay magaaladii oo lagu kala adkaaday tiknikadeedi isdaba galisay. Suufka iyo halkii ay ka soo duushay ku noqotay. Fidnadii malinkaa dhalatay waxay ku fidday miyiga. Muuddo dhawr sano ah waa shidnaud colaaddii ka kacday: dhufays yaanyoow ah .
Baryahan dambe, Meles Zanawi; waxaa laga soo sheegay inuu yiri; “DF ee soomaaliya hadday cagaheeda isku taagto iyo hadday salka dulka ku hayso, ciidamadayda waa la baxayaa”. Dhab, hadday ka tahay iyo hadduu dhagar ulajeedo, garaadka soomaalidu waa in uusan ka hoos dhicin Doonaani-gii , kolkii, Colaad caanaha Doorshaanku ku dhacay ku miray, yiri; “Colaad caano iguma miri jirine ma Doorshaan baa ugu dhacay?!".
Feejignaan iyo taxaddar ku dhisan xisaabtan iyo aqoon la isu lee yahay ayaa iswaydiintaa ku dhalisay Doonaani. Sidaa darteed, haddii soomaali feejigantahay waa in ay iswaydiisaa; Kow: ma dharbaaxada geesiga ah oo muqaawamadu la daba gashay ciidanka Tigraha, ayaa cararka ciidamada xabashida keenay?. Labo: mise, waa dabin hor leh oo xabashi iyo taageere yaasheedu ku doonayaan in ay soomaali isku garaacaan -"Lafo Gari iyagaa la isku jabshaa"- oo waa; “SAXWO SOOMAALIYEED”, oo la doonayayo in la curiyo?!.
Soomaali sida ay tiraahdo; "khayr wax kaama dhimee shar u tooghay”. haddaan raaco warka koowaad; waa khayr iyo guul, dhibna ma laha. Inkasta oo ay waajib tahay; in ay diyaarsan tahay taladii lagu dhaqaaqi lahaa maalinkay xabashi guurto, maalinka xiga (THE DAY AFTER) . Hoog iyo ba' waa markaan Doonaani ka liidanno oo dabinka xabashi iyo taageera yaasheedu dhigeen afka ugu dhacno. Dhufayskiii Baladxaawo, xabaddii USC iyo halgankii S.Y.L oo, intaba aan la is oran, maxaa ka dambayn doona?!. Markale, ma talo xumaan ka wardoonaa?. Haba yaraadee garaad kordhay, ma wuusan jirin?!.
Xabashi iyo taageere yaasheedu, waxay u haliilayaan, meel walba in ay kaga sheekeeyaan; “maxaan idin niri?!. Wuxu waa reer miyi,wali aan ismaamul baran. Gobanimadii lixdankii la siiyay ayaa khalad ahayd. Qaabka kaliya oo looga nabad-geli-karo, laguna kala badbaadin karo waa in gobollo qabiil isu maamula loo kala qaybiyo, dawladii markaa “Addis Ababa” ka talisana dusha ay ka maamusho. Badda dheer oo Berigooda ku qummanna waa in ay ammaankeeda faraha ku qabtaan; Maraakiib ay lee yihiin “Dawladaha Caalamka” oo arrintaa awooda u leh, danuhuna uga xiran yihiin. Bal daya, waa kuwaa isdilay maalinkaan ka guurray?. Wuxu caaqibo ma leh ee yaan lagu daalin". Aan u talinee, faraha ha lagala boxo!.
Waa xeel fog oo xabashi iyo garbaheeda meel u taal. Dawladuhu, ma ah ruux degdegsan oo kale. Qorshe, natiijadiisa, labaatan, soddon, konto sano la dhawro ayay dagsadaan dulqaad keedna yeeshaan. Madaxda xukuumadda oo kaliyaa isbadasha. Qorshe dawladeed wixii soo kordha oo kaliya ayaa laga tashadaa.
Dhariga, maanta la karinayo waa in; "Murabacii (Afargeeskii) koowaad soomaali dib loogu cesho, (BACK TO SQUER ONE)”. Xabashi inta aanay guurin -haddiba ay guurayso- waa in laga soo oodaa dariishad kasta oo ay dib uga soo galin karto “War Lords-kii”. Hub iyo rasaas ku filan kolley waa u reebaysaa. Saxwo tiii reer Ciraaq oo kale ah; in la abuuro, waa waxa loo dig iyo ham lee yahay.
Haddan, digtooni buuxda la galin, aragtidayda; “maalinka damba, waxa la yiraahdo; “Bulshada Caalamku” waxay soo saari; Warbixin Takhtareed (Medical Report) oranaysa; “Isku day fara badan, dabadeed, cudurka soomaaliya, waqtigan la joogo, wax dawo ah looma hayo, iayguna -soomaali- kala xishoon waaye, isu turi waaye, isna qaban kari waaye. Sida darteed, inta dawo cudurkooda dawaysa laga soo saarayo; si soomaali u kala badbaaddo, sharteedana looga naba galo - cid daris la ah iyo cid aan la ahayn - waa in; cadad yar-yar oo gacanta lagu hayn karo loo kala jar-jaro. Sidaa oo kaliya, ayaa madax xanuunka soomaaliya “Bulshada Caalamku” kaga nasan kartaa!.
“Bulshada Caalamka” ee Madical Report-ka soo saartay, kuwa ay yhiin, cid si dhab ah u qeexi karta ma jirto. Balse, Hawsha caynkaa oo kale ah; waxaa meel marin kara ciddii kartideeda iyo xooggeeda leh. Midda kaliya oo aan hubo; waa in xoog xabshashi kaligeed ah aan lagu fulin karin damaca; “Bulshada Caalamka”.
Alle, kor ahaaye; (Suurat Yuusuf) oo uu ku tilmaamay; “sheekooyinka tan ugu wanaagsan”, wuxuu noogu sheegay; kolkii, Nabi Yacquub uu dirayay wiilshiisa, in uu ku yiri: (Wiilashayow taga oo soo daydaya (warkii) Yuusuf iyo walaalkiis hana ka quusanina naxariista Eebbe [farajkiisa] kama quustaan frajka Eebbe qoon gaala ah mooyee) [Suurat Yuusuf : 87].
Haddii Eebbe, idmo, soomaali waa is-heli doontaa, ruxii raxmadda Eebbe ka quustana, gaaloow. Dhanka kale, ogaada; “Qaansheegta Ilduufka Soomaalid”, san-ku-neefle kasta oo soomaali; meeshuu doono ha joogo, reerkuu doono ha u dhashoo, wuxuu doono ha aaminsanaado, indhihiisa oo soo cad-cad ayuu bixin Qaan-sheegta Ilduufka. Fadllan, yaan la isku khaldin; oddorosid iyo waaqica markaa taagan.
Ximbil: waa milkiilaha makhaayad ka mid ah makhaayadaha Baladxaawo ee aadka loo fariisto.
 Buur-aaminoow: waa halka ay taal Xarunta Ciidamada xabashida oo gobolka Gedo dul fadhiya Waa meeshii
amarada laga soo qaadan jiray. Hadda Addis Ababa ayaa amarada looga soo qaataa.
Buurta Labada Celi: waa buurta magaalada B/xaawo ka saaran dhanka waaddada Ceelwaaq. Hore waxaa loo yiqiin
jiray Buurta Celi Dheere.
Yaanyoow: shaygu markuu xun (xumaan) ka sii liito. Badanaa, reer Banaadirka ayaa adeegsada.
Doonaani: wuxuu ahaa nin 70sano (meelahaa) mar laga joogo ku noolaa dhulka hadda la yirrahdo Gobolka
Galguduud. Dad badan baa ku tuhmay in garashadiisu daahdo. Balse waxaa muuqata in uu ahaa nin aad u feejigan,
oo yaqaan ruux walba wuxuu ka fili karo.
Saxwa: micne ahaan waa baraarug. Eraybixin ahaan waa qab'il Maraykanku ka abaabul Gobolka Anbaar ee
Ciraaq. Ujeedada waa in ciraaqiyiinta lafo gari laga dhigo, dabadeed, la isku jabiyoo.
THE DAY AFTER: waa magaca filim aan 70yadii Shineemooyinka Xamar mid ka mid ah aan ku daawada. Qisada filmku waxay ku saabsanay Midowga Soofyeetigii hore (Ruusiyada maanta) oo Magaalada New yoke (USA) oo ay ku noolyihiin dad fara badan ku dhufatay “Atoomig Bom”. Maalinkii Bamku ku dhacay maalinkii xigay sida xaal noqday ayuu sawiray filimku. Bal adna sawiro maalinka ama habaynka xabashi baxdo waxa dhici kara haddaan xikmad xirrab dheer soomaali la iman. Baladxaawo cashar lagu cibro qaato, ma noqon kartaa?!.